Yenza ifektri kanye ne-OEM / Umenzi Wezimonyo Wezifiso | Ukwakheka kwe-banflee
I-Banffee Makeup - I-Professional Make Up Factory& Umkhiqizi Wezimonyo Owenziwe ngokwezifiso
Izindebe Imikhiqizo Yezindebe
Izindebe zip balm
Imikhiqizo yokwakheka kobuso
I-Highlighter & Bronzer
Amehlo imikhiqizo yokwenza
YIMA UJABULELE UBUHLE BAKHO
Vumela I-Banffee Makeup Isabalale Kuwo Wonke Amagumbi Omhlaba! Singabakhi bezimonyo be-OEM & ODM abaqeqeshiwe.
UBanffee Makeup unguchwephesheimboni yokwenza kanye nomkhiqizi wemikhiqizo yezimonyo e-China yazo zonke izinhlobo zezimonyo zamehlo, izimonyo zobuso nezimonyo zomlomo. Imikhiqizo yethu eyinhloko ihlanganisa i-lipstick, ama-eyeshadow palettes, ama-eyeliners, isisekelo, impushana ecindezelwe, i-highlighter& i-bronzer, njll.
.I-Banffee Makeup ingabakhiqizi bezimonyo abadayiswa kakhulu abanezimonyo zomkhiqizo wethu ezithengiswa kakhulu futhi bahlinzeka ngesevisi ye-OEM/ODM.
Siyi-OEM yochwepheshe& I-ODM umenzi we-makeup, ebeka ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa nokuthengisa endaweni eyodwa. Sinegama elihle lemishini yethu ethuthukisiwe, ithimba labadayisi abaqeqeshiwe, i-R eqinile& D ithimba iminyaka engaphezu kwe-10, ukuhlinzekwa kwezinto zokusetshenziswa ezivela emhlabeni wonke. I-Banffee Makeup inikeza isevisi yangokwezifiso yangokwezifiso yazo zonke izinhlobo zemikhiqizo yezimonyo. Uma ufuna umenzi we-OEM wezimonyo, xhumana nathi.
Umbuzo:Amakhasimende atshela isici sefomu alifunayo, ukucaciswa kokusebenza, umjikelezo wempilo, kanye nezimfuneko zokuthobela.
Idizayini: Ithimba lokuklama lihileleke kusukela ekuqaleni kwephrojekthi ukuze kuqinisekiswe imikhiqizo engcono kakhulu eyenziwe ngokwezifiso ukuze ihambisane nezidingo zamakhasimende.
Ukuphathwa Kwekhwalithi: Ukuze sinikeze izakhiwo zekhwalithi ephezulu, sigcina ukusebenza kahle& Uhlelo Lokuphathwa Kwekhwalithi olusebenzayo.
KWENZIWE NGEFAKA MANJE
I-Banffee Makeup ihlinzeka ngezixazululo zokuma okukodwa kwemikhiqizo yezimonyo eziqalayo: hlinzeka ngochungechunge olugcwele lwezinsizakalo zokwenza ngokwezifiso njengokuklama komkhiqizo, idizayini yokupakishwa komkhiqizo, ukuhlaziya ukuma kwesixuku semakethe yomkhiqizo, ukuthuthukiswa komkhiqizo nokukhiqizwa, ukuqeqeshwa kokuthengiswa kwemikhiqizo, njll.
Njengefekthri/umkhiqizi wokwenza iminyaka eyi-16, I-Banffee Makeup iyakwazi ukuhlinzeka ngezimonyo zekhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana.
Imikhiqizo ayithandwa ngabathengi basekhaya kuphela, kodwa futhi ithunyelwa eSoutheast Asia, Middle East, Africa, Ea...
Sinedumela elihle lemishini yethu ethuthukisiwe, ithimba labadayisi abangochwepheshe.
Isevisi yokuma okukodwa
I-Banffee ingahlinzeka ngefomula eyenziwe ngokwezifiso, amaphakheji enziwe ngokwezifiso, idizayini yamahhala, isevisi yokuthumela kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa...
Unya mahhala& i-vegan
uchungechunge lwe-roduct lufaka i-eyeshadow, i-lipstick, i-lipgloss, i-lip balm, ishiya, i-eyeliner, i-mascara, isisekelo, i-highlighter, c...
I-Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. yasungulwa ngo-2015. Ikomkhulu layo kanye ne-R&Isizinda se-D sitholakala eJianggao Town Industrial Park, esifundeni saseBaiyun, eDolobheni laseGuangzhou, elinendawo ecebile yamasiko. Inkampani igxile ekuthuthukisweni, ekuklameni, ekukhiqizeni, ekuthengisweni nasekuhlinzekeni ngezimonyo ezisezingeni eliphezulu, ifekthri edidiyelwe yokwakheka kanye nomkhiqizi wezimonyo owenziwe ngezifiso.
Ngemuva kweminyaka engu-7 yokuthuthuka, i-Banffee Makeup ithole izitifiketi ze-ISO22716, GMP, SGS, FDA, futhi inethimba locwaningo nokuthuthukiswa kwezobuchwepheshe, indawo yokusebenzela yokukhiqiza ye-GMPC enkulu, imishini yokukhiqiza ezenzakalelayo yesimanje, kanye nokuhlinzekwa kwamanye amazwe. uchungechunge lokungenisa impahla eluhlaza. Manje isiphenduke inkampani yemikhiqizo yezimonyo eyaziwayo embonini yezimonyo, iphuma nohlobo lwayo lwe-KILLFE. Uma ufuna abakhiqizi bezimonyo abachwepheshile nabathembekile befektri/OEM, wamukelekile ukuxhumana nathi.
Iminyaka engu-16 yesipiliyoni endaweni ye-Cosmetics.
Inkampani eqinisekisiwe enezitifiketi eziningi.
Isevisi yokuma okukodwa yamakhasimende ethu.
Nazi izindaba zakamuva mayelana nenkampani yethu kanye nezimboni. Funda lokhu okuthunyelwe ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nemikhiqizo kanye nemboni futhi ngaleyo ndlela uthole ugqozi lwephrojekthi yakho. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi kufanele sifunde ukuthi isikhumba esilungiswe kahle singakwazi ukufeza izinto eziningi obungakaze ucabange ukuthi ungazifinyelela.
Amaphalethi Eyeshadow Amaholide aphezulu e-Banffee Makeup
Uhla olumangalisayo lwamaphalethi ama-eyeshadow eholide e-Banffee. Ngaphandle kwemibala emihle nemithunzi, kukhona eziningana ...
Umkhiqizo omusha we-Banffee
——Elandela imikhiqizo eyisisekelo yokunakekelwa kwesikhumba, u-Banffee usungule imikhiqizo yezimonyo eyisisekelo yezenzo eziningi ukuze andise umugqa womkhiqizo okhona...
Sula I-Lip Liner - Gcina I-Lipstick Yakho Iqinile Usuku Lonke
Njengawo wonke umkhiqizo wezimonyo, ama-lip liners acacile enza impilo ibe lula. Yiziphi izinzuzo zayo futhi ivimbela kanjani i-smudgi...
Izinzuzo Zokucwebezela Kwezindebe Zemvelo kanye Nendlela Yokukhetha Ukucwebezela Kwezindebe Kwemvelo Okungcono Kakhulu
#Izindebe ezicwebezelayo zemvelo ezingcono kakhulu ziyikhambi langempela lezindebe zomuntu eziqhephukile neziqhekekile. Chofoza lapha ukuze uthole ukuthi zizuzisa kanjani...
Ungabekaphi I-Highlighter Ebusweni?
Isinyathelo ngesinyathelo lapho ungabeka khona i-highlighter ebusweni bese usebenzisa i-highlighter ukwenza kangcono isiphongo sakho, izihlathi, nekhala...
Iyiphi i-lipstick elungele ukusetshenziswa nsuku zonke?
Sawubona, asiqhubeke sithintana!
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo noma amasevisi ethu,
zizwe ukhululekile ukufinyelela ithimba lesevisi yamakhasimende.
Indlela Esikwenza Ngayo Hlangana Futhi Sichaze Umhlaba jikelele
I-Guangzhou Banffee Cosmetics I-Co., Ltd. yasungulwa ngo-2015. Sigxila ekuthuthukisweni, ekuklanyeni, ekukhiqizeni, ekuthengisweni nasekunikezeni izinto zezimonyo ezisezingeni eliphezulu.
ZIZWE UKHULULEKILE UKUTHI XHUMANA NATHI
Ikheli: Igumbi 307, Isakhiwo 4, No. 4, Greenland Airport Centre, Huadu District, Guangzhou